Madaxweynaha Turkiga iyo Dhaxal-sugaha Boqortooyada Sacuudiga oo ka wada hadlay marxaladda cusub ee iskaashiga xiriirka labada dal | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Madaxweynaha Turkiga iyo Dhaxal-sugaha Boqortooyada Sacuudiga oo ka wada hadlay marxaladda cusub ee iskaashiga xiriirka labada dal
Muqdisho(SONNA):-Madaxweynaha Turkiga iyo Dhaxal-sugaha Boqortooyada Sacuudiga ayaa ka wada hadlay marxaladda cusub ee iskaashiga xiriirka labada dal, sida siyaasadda, dhaqaalaha, ciidamada, amniga, iyo xiriirka dhaqanka.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga ku soo dhoweeyay dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan.
Sida lagu sheegay bayaan wadajir ah, madaxdu waxay ku nuux nuuxsadeen sida ay muhiim ugu tahay labada dal marxaladan cusub ee iskaashi iyo sida looga midho dhalin karo” Ankara iyo Riyaad waxay go’aansadeen inay sii qoto dheereeyaan wadatashiga iyo iskaashiga arrimaha gobolka si loo xoojiyo xasilloonida iyo nabadda,” ayaa lagu yiri warbixinta wadajirka ah.
Madaxweynaha Turkiga ayaa hore bishii Abriil, waxa uu booqasho shaqo oo laba maalmood qaadatay ku tagay dalka Sucuudiga, ujeeddadiisuna ahayd in kor loo qaado xiriirka laba geesoodka ah ee labada dal,isagoo intii uu booqashada ku gudo jiray na kulan la qaatay Boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan Bin C/casiis Aala Sucuud iyo sidoo kale Dhaxal sugaha Boqortooyada, waxa ayna ka wada hadleen arrimo kala duwan oo caalami ah.
Previous articleCiidanka Danab iyo Nabad Sugidda Jubaland oo jab xooggan gaarsiiyey Argagixisadda Al-shabaab
Next articleku-simaha madaxweynaha dalka ahna Guddoomiyaha Golaha Shacabka BJFS oo shir gudoomiyey kulan looga hadlaayey Amniga guud ee dalka